चार वर्षीय छोरीको हत्या गरेकी आमाले अदालतमा भनिन् आई एम सरी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
चार वर्षीय छोरीको हत्या गरेकी आमाले अदालतमा भनिन् आई एम सरी
डिसी नेपाल , २९ जेठ २०७५
अपराध । मानिस होस् वा जनावर सबैका लागि आफ्नो सन्तान प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ । मानिस, जनावर, चरालगायत सबै प्राणीका लागि आफ्नो सन्तान उत्तीकै प्यारो हुन्छ । अनि सन्तानको सुरक्षा तथा मायाममताको सबालमा आमाको माया अतुलनिय हुन्छ ।
तर कतिपय आमा यस्ता पनि हुन्छन् जो आफ्नै सन्तानको हत्या गर्न पछि पर्दैनन् । यस्तै एउटा घट्नाले अहिले सामाजिक संजालमा चर्चा बटुलेको छ ।
ब्रिटेनको साउथ वेल्समा एक दर्दनाक घटना घटेको छ । जो कोहीलाई चिन्तित बनाउन सक्ने यो घटना थाहा पाएर तपाई पनि आश्चर्य मान्नु हुनेछ । एउटी आमाले आफ्नी चार वर्षीय प्यारी छोरीको हत्या गरेकी छिन् ।
अमेलिया ब्रुकी ह्यारीस नाम गरेकी चार वर्षीय छोरीको हत्या गरेको अभियोगमा ३७ वर्षीय आमा कार्ली ह्यारीसलाई स्थानिय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । यो घटना गत शुक्रबार को हो ।
हत्याको आशंकामा प्रहरीले आमा कार्ली हर्रिसलाई अदालत सामु प्रस्तुत गर्दा हर्रिसले आफ्नो अपराध स्विकार गर्दै न्यायाधिश समक्ष- आई एम सरी, आई एम सरी, भन्दै राईकराई गरेकी थिइन् ।
स्थानीय प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने आमा कार्लिले आफ्नै प्यारी छारीको हत्या गर्नुको कारण के हो भन्ने जानकारी बाहिर आएको छैन ।